Maxay ganacsata Kenya u doorbidaan suuqyada Aasiya? - BBC Somali
Maxay ganacsata Kenya u doorbidaan suuqyada Aasiya?
25 Luulyo 2015
Madaxweynayaasha dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa maanta waxa ay heshiis laba geesood ah ku kala saxiixan doonaan magaalada Nairobi, heshiiskan ayaana ah mid daba socda booqashada madaxweyne Obama ee Kenya.
Heshiisyada ayaa intooda badan noqon doono dhinaca ganacsiga, inkastoo ganacsatada dalka Kenya ay door bidaan in ay allaabaha ka keensadaan dalka Shiinaha iyo waddamo kale o ku yaalla qaaradda Asia, sababo la xiriira sicirka oo hooseeya iyo qiimaha alaabaha oo ah mid laga xaajoon karo.
Axmed Xaaji Xasan oo dhawaan booqday dekadda Mombasa ayaa warbixintaan inooga diyaariyay.